Hetsika tao Barikadimy Toamasina : Mpianatra 19 nosamborin’ny zandary -
AccueilSongandinaHetsika tao Barikadimy Toamasina : Mpianatra 19 nosamborin’ny zandary
Hetsika tao Barikadimy Toamasina : Mpianatra 19 nosamborin’ny zandary
06/03/2018 admintriatra Songandina 0
Mpianatra miisa sivy ambin’ny folo avy ao amin’ny oniversiten’i Barikadimy ao Toamasina no nosamborin’ny zandary tany an-toerana ny alahady 04 martsa lasa teo, tokony ho tamin’ny 07 ora sy 45 minitra alina. Ireto farany dia isan’ireo nitarika korontana sy savorovoro tany an-toerana, izay niafara tamin’ny fanimbana zavatr’olona maro. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia noho ny fahatapahan-jiro tamin’io andro io, izay nanomboka tamin’ny 08 ora maraina no anton’izany fihetsiketsehana nataon’ireo mpianatra ireo izany. ” Nivoaka teo amin’ny lalam-pirenena faharoa iny izy ireo ary nanao barazy tamin’ny alalan’ny fandoroana kitay sy kodiarana manoloana ny vavahadin’ny oniversite. Nopotipotehin’izy ireo avokoa izay fiara sy bajaj nandalo teo an-toerana”, hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary any Toamasina. Noho izay zava-niseho izay, dia nampandre ireo mpitandro filaminana avy hatrany ny olona tao anatin’ilay bajaj iray isan’ny potika tanteraka tamin’io fotoana io. Nidina ifotony nijery akaiky ny zava-nisy ihany koa ireo zandary sy polisy vantany vao nahazo antso. “Vao tonga teny an-toerana izahay, dia tora-bato tsy nifankahitana ohatran’ny fanaony rehefa mahita mpitandro filaminana no nataon’ireo mpianatra. Tsy maintsy nanapoaka lakrimozena izahay mba hanaparitahana azy ireo”, hoy ny fanampim-panazavana. Niparitaka ary nitsoaka niditra ny faritry ny oniversite noho izany ireo mpianatra marobe ireo. Rehefa nanala ireo barazy anefa ireo mpitandro filaminana, dia raikitra indray ny tora-bato tsy an-kiato avy ao anatin’ny faritra hianaran’ireo mpianatra.
Tao anatin’ny hamamoana
Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimaria any an-toerana ihany, dia fantatra fa mamo avokoa ny ankabeazan’ireo mpianatra niteraka savorovoro tany an-toerana. Manoloana izany fandikan-dalàna maro izany, dia tsy nilefitra ireo mpitandro ny filaminana. Rehefa afaka ny “franchise universitaire” taorian’ny fifampiresahana tamin’ny tomponandraikitra eo anivon’ity ivon-toeram-pampianarana ambony ao Barikadimy ity, dia nanenjika sy nisambotra ireo mpianatra avy hatrany ireo manam-pahefana. Na dia efa nandroso ho alina aza ny andro, dia tsy namelan’ireto farany raha tsy nahitam-bokany izany. Tra-tehaka nandritra izay fanenjehana izay noho izany ny sivy ambin’ny folo tamin’ireo andiana mpianatra marobe niteraka korontana ireo, izay nentina nanaovana fanadihadiana tany amin’ny biraon’ny zandary avy hatrany , ahafantarana ireo tena atidoha tamin’ny fanimbana ireo zavatr’olona. “Olona miisa efatra no efa nametraka fitoriana vokatry ny fahavoazana nahazo azy ireo”, hoy ihany ny loharanom-baovao. Rehefa nandeha moa ny adina am-bava, dia nalefa nody omaly maraina ny valo tamin’ireo nosamborina, satria dia tsy nisy zavatra hanenjehana azy ireo. Notazomina kosa ireo iraika ambin’ny folo ambiny, ahafahana manohy ny fakana am-bavany. Tsy mbola nahazoam-baovao mazava moa ny antony tena nahatapaka ny jiro tany an-toerana izay nampisafoaka ireo andiana mpianatra, ka nahatonga azy ireo hanao ireny fihetsiketsehana. Na dia teo aza anefa izay antony izay, dia tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe, satria dia miteraka tsy fandriam-pahalemana ary manohintohina tanteraka ny fahafahan’ny hafa mivezivezy izany.
Mazava. Tsy miova amin’ny foto-kevitra hijoroany ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara, na ny HVM. Manaporofo izany ny fanambaran’ny filoha nasionalin’ny HVM, Rivo Rakotovao, nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety, nandritra ny fanokafana tamin’ny ...Tohiny
Fivarotana ny Villa Elisabeth : Hitory eny amin’ny Bianco ny Fanjakana